चर्चित ५ नायिकाको पहिलो पारिश्रमिक कति ? - Khabarsansar.com
चर्चित ५ नायिकाको पहिलो पारिश्रमिक कति ?
नेपाली चलचित्रको पछिल्लो परिवेशलाई नियाल्ने हो भने हरेक फिल्मबाट एक न एक नायक तथा नायिकाको डेब्यु हुने गरेको छ । बिगतका बर्ष भन्दा अहिले हरेक पक्षबाट उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणमा लागिपरेका छन चलचित्रकर्मीहरु । यसले गर्दा सिनेमा प्रेमी दर्शकहरुले पनि नेपाली फिल्मलाई सकारात्मक सोच्दै हलसम्म पुग्ने गरेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ ।
मल्टिट्यालेण्ट अभिनेत्रीको रुपमा चिनिएकी प्रीयंका कार्की यतिबेला ब्यस्त नायिका भित्रै पर्छिन । कहिले चलचित्र सुटिङ, कहिले चलचित्र प्रोमोसन त कहिले म्युजिक भिडियो सुटिङ देखि देश बिदेशका कार्यक्रमहरुमा समेत सहभागी हुन भ्याउछिन उनि । आफ्नो पहिलो चलचित्रबाट १ लाख २० हजार पारिश्रमिक लिएकि उनले अहिले एउटा म्युजिक भिडियो गरे बापत मात्रै ५० हजार लिन्छिन । उनको फिल्म ‘ह्याप्पी डेज’ सम्मको पारिश्रमिकलाई हेर्ने हो भने सो चलचित्रमा उनले ४ लाख लिएकी छिन ।
प्रदर्शनरत चलचित्र ‘रुद्रप्रीया’ की नायिका रेखा थापा ले आफ्नो पहिलो चलचित्र ‘हिरो’ बाट निर्माता छबिराज ओझाबाट २१ हजार पारिश्रमिक लिएकी थिइन । फिल्ममा उनी भए पछि हिरोको आवस्यक नपर्ने भनेर पनि चर्चा थियो भने ८ बर्षको बोलचाल बन्द पछि आफैले डेब्यु गराएकि नायक आर्यन संग रुद्रप्रीया मा जोडि बाधिइन तर पुनरागमन भएको उनिहरुको जोडिले खासै उपलब्धि देखाउन सकेन । अहिले रेखा चलचित्र अभिनय, निर्माण संगै राजनितीमा पनि सक्रिय छिन ।
पहिलो चलचित्रबाटै अभिनयमा तारिफै तारिफ बटुलेकी नायिका हुन साम्राज्ञि राज्यलक्ष्मी साह । ‘ड्रीम्स’ चलचित्रबाट फिल्म यात्रा सुरु गरेकी उनलाई पनि हरेक फिल्ममा पारिश्रमिक बढाईरहने नायिका भित्र पर्छिन । उनको डेब्यु फिल्म ‘ड्रिम्स’ निर्माता भुवन केसीले १ लाख पारिश्रमिक दिएका थिए । उनी अभिनित फिल्मले ब्यापारिक सफलता पाईरहेको छ भने अभिनयमा अब्बल ठहरिदै गएकी छिन । पछिल्लो समय नेपालि फिल्ममा सर्बा्धिक पारिश्रमिक लिने नायिका भित्र पनि पर्छिन ।
नायिका केकि अधिकारी अहिले फिल्म निर्माण पट्टी पनि सामेल भएकी छिन । यसो त उनले अभिनयलाई फुलस्टप लगाएकी भने हैन । फिल्म निर्माण संगै अभिनयलाई पनि अगाडि बढाउने लक्ष उनको रहेको छ । उनले आफ्नो पहिलो चलचित्र ‘स्वर’ बाट १ लाख पाएकी बताउछिन । उनी अभिनित चलचित्र ऐश्वर्य अहिले प्रदर्शनरत छ भने यसबाट पनि उनले राम्रै पारिश्रमिक लिएकी थिइन ।
नम्रता श्रेष्ठ पनि अभिनयमा अब्बल नायिकाको रुपमा चिनिएकि छिन । यसको गतिलो प्रमाण हो ‘क्लासिक’ । यो फिल्मबाट उनले अभिनयमा निकै राम्रो तारिफ बटुलिन । केही बर्ष अगाडि ‘यौन काण्ड’ मा मुछिएर फिल्म बिहिन बनेकी नम्रता आफ्नो बिगतलाई भुलाउन पुनः फिल्म अभिनयमा सक्रिय छिन । पछिल्ला फिल्महरुले उनको बिगत भुलाएर जिवनको नयाँ अध्याय सुरु भएको देख्न सकिन्छ । नम्रताले आफ्नो पहिलो डेब्यु चलचित्र ‘सानो संसार’ बाट १ लाखभन्दा माथि पारिश्रमिक लिएकी थिइन भने पछिल्ला फिल्महरुमा पनि महँगो पारिश्रमिक सहित अभिनय गर्छिन ।
अमेरिकामा नेपाली चेलीले जितिन मिस ईनटरनेशनल उपाधी
आज वाला चतुर्दशी, शिव मन्दिरमा शतविज छरिदै
चुनावको प्रचारको लागि गायक स्यामसोङ भोजपुरमा
सलमान खान फेरी चुलबुल पाण्डे बन्ने
अन्तर्जातीय विवाह गर्ने नेपाली कलाकार
महानगरका शिक्षा उपसचिव भए कार्यालय विहीन
मतदानबाट वञ्चित हुँदै पाँच लाख कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी
आँसुमा डुब्यो तिलाठीस् छठ मनाएर फर्किएका आफन्त दुर्घटनामा परेपछि‘
No contact information available now.